China HY33, HYS43 multi-bar ngentsontelo umatshini ukunitha yoMvelisi kunye Supplier | UAoyuan
Ikham ye-oyile-emanzini, i-eccentric yokudibanisa indlela yokuhambisa intonga, ikama elisezantsi kunye ne-elastic yam nge-elektroniki yokuyeka, ilaphu le-spandex lamkela ukusongwa kwe-elektroniki.
Isetyenziselwa ukunitha iintambo ezahlukeneyo zelastiki, amalaphu e-jacquard kunye nelaphu lokuhombisa i-jacquard, njl njl. Isetyenziswa kakhulu kwizambatho, izihlangu, iibhegi, imihombiso yasekhaya, njl.
Umatshini we-warp ukunitha ugxile ekuveliseni i-jacquard enetiweyo, efana nekhethini elijiweyo, ilaphu le tafile, i-elastic kunye ne-un-elastic ejiweyo kunye ne-lace. Ukudityaniswa kwemivalo emininzi, kunye nokucofa umsonto kwandisa amandla e-jacquard kunye nefuthe lomatshini. , Kunye nokuphuhliswa kunye nokusetyenziswa kwefayibha entsha eyahlukeneyo, egqibezela umsebenzi wemodem yomatshini wokuluka we-bar-knitting nge-press presser, kunye nokuguqula ubuchule obelukiweyo be-warp kunye nobuchule obutsha bokudaya, ilaphu elinemigca emininzi enomsonto Umshicileli unokuphuculwa okungaphezulu kokusebenza, ukubonakala kwangaphandle kunye nomgangatho njl.njl isetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke iintlobo zeekholingi kunye neemveliso zekhaya.
350-400r / min
Ukuhlawula nge-elektroniki ukubhatala i-4, umgaqo wesantya ongashukumiyo, ukubhijelwa ngombane
5005 * 2100 * 2800
6500 * 2100 * 2800
Ukuhanjiswa kwe-elektroniki (i-EBC) kunye nezixhobo eziphambili ze-elektroniki (EL) zinokongezwa kumatshini ngamnye. Unokusebenzisa umsonto osisicaba okanye ongatshatanga, okanye uya kuba yindibaniselwano yentsimbi ethe tyaba okanye indibaniselwano yokuluka, ukuze ubume bomatshini buhlengahlengiswe, khetha isinyanda se-shaft okanye isitayile se-roller okanye olunye ulwakhiwo, ngokwesigqibo esenziwe ngelaphu somthengi, ukusebenza komatshini ilula, kulula, kulula ukuyifunda. Umatshini une-jiko elizimeleyo, i-jiko elizimeleyo, ukubhijela i-friction yabathengi ukuba bakhethe. Imodeli nganye inokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zabathengi, inkonzo ephezulu kubathengi, ukwenzela ukuba abathengi benze iimveliso ezonelisayo, bagcine iindleko, baphucule amandla.
Egqithileyo HYF43 / 20,31 / 16 multi bar schlagblech Warp ukunitha umatshini
Okulandelayo: HY280 intshukumo elektroniki ngokujika-high speed ngesantya esinye umatshini ukunitha umatshini